सामान्य फाइबर विफलताहरु र उनीहरुको समाधान - समाचार - Zhejiang Chaolian इलेक्ट्रोनिक कं, लिमिटेड
पातलो अप्टिकल फाइबर एक प्लास्टिक म्यान मा समेटिएको छ ताकि यो तोड्ने बिना झुकाउन सकिन्छ। सामान्यतया, अप्टिकल फाइबर को एक छेउ मा प्रसारण यन्त्र एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड वा एक लेजर बीम को उपयोग गर्दछ प्रकाश दालहरु लाई अप्टिकल फाइबर लाई प्रसारण गर्न को लागी, र अप्टिकल फाइबर को अर्को छेउमा प्राप्त गर्ने उपकरण एक संवेदनशील तत्व को उपयोग गर्दछ पत्ता लगाउन को लागी दालहरु।
पहिले, चाहे अप्टिकल फाइबर ट्रान्सीभर को सूचक प्रकाश वा अप्टिकल फाइबर मोड्युल र मुड़ जोडी पोर्ट को सूचक प्रकाश मा छन्
यदि ट्रान्सीभर को FX सूचक बन्द छ, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फाइबर लिंक पार जोडिएको छ कि छैन; फाइबर जम्पर को एक अन्त समानांतर मा जोडिएको छ; अर्को अन्त क्रस मोड मा जोडिएको छ। यदि A ट्रान्सीभर को अप्टिकल पोर्ट (FX) सूचक मा छ र B ट्रान्सीवर को अप्टिकल पोर्ट (FX) सूचक बन्द छ, गलती A ट्रान्सीवर मा छ: एक सम्भावना हो: एक ट्रान्सीभर (TX) अप्टिकल ट्रान्समिशन पोर्ट खराब भएको छ, किनकि बी ट्रान्सीभर को अप्टिकल पोर्ट (RX) अप्टिकल संकेत प्राप्त गर्न सक्दैन; अर्को सम्भावना छ: A ट्रान्सीभर (TX) को अप्टिकल प्रसारण पोर्ट को अप्टिकल फाइबर लिंक एक समस्या छ (अप्टिकल केबल वा अप्टिकल फाइबर जम्पर भाँचिएको हुन सक्छ)।
ट्विस्ट जोडी (TP) सूचक बन्द छ, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि ट्विस्टेड जोडी जडान गलत छ वा जडान गलत छ। परीक्षण को लागी एक निरन्तरता परीक्षक को उपयोग गर्नुहोस्; केहि transceivers दुई RJ45 पोर्टहरु छन्: (हब को लागी) संकेत गर्दछ कि स्विच लाई जोड्ने केबल एक सीधा को माध्यम बाट लाइन हो; (नोड को लागी) संकेत गर्दछ कि स्विच लाई जोड्ने केबल एक क्रसओभर केबल हो; केहि ट्रान्समिटरहरु छेउमा एक MPR स्विच छ: यसको मतलब यो छ कि स्विच को लागी कनेक्शन लाइन एक सीधा को माध्यम बाट लाइन हो; DTE स्विच: जडान लाइन कि स्विच संग जोडिएको छ एक क्रसओभर लाइन हो।
दोस्रो, एक अप्टिकल पावर मीटर पत्ता लगाउन को लागी प्रयोग गर्नुहोस्
सामान्य अवस्थामा फाइबर अप्टिक ट्रान्सीभर वा अप्टिकल मोड्युल को चमकदार शक्ति: multimode: -10db र 18db बीच; एकल मोड 20 किमी: -8db र 15db बीच; एकल मोड 60 किमी: -5db र 12db बीच; यदि अप्टिकल फाइबर ट्रान्सीभर को चमकदार शक्ति -30db-45db को बीचमा छ, तब यो ट्रान्सीभर संग एक समस्या छ कि न्याय गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, त्यहाँ आधा/पूर्ण डुप्लेक्स मोड मा कुनै त्रुटि छ
त्यहाँ केहि ट्रान्सीभर को पक्ष मा एक FDX स्विच छ: यसको मतलब पूर्ण डुप्लेक्स; HDX स्विच: यसको मतलब आधा डुप्लेक्स हो।
चौथो, चाहे फाइबर अप्टिक केबल र फाइबर jumpers भाँचिएको छ
a अप्टिकल केबल अन-अफ पत्ता लगाउने: एक लेजर टर्च, सूर्यको प्रकाश, वा प्रकाशक अप्टिकल केबल कनेक्टर वा युग्मक को एक छेउमा उज्यालो गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्; हेर्नुहोस् यदि त्यहाँ अर्को छेउमा दृश्य प्रकाश छ? यदि त्यहाँ दृश्य प्रकाश छ, यो संकेत गर्दछ कि अप्टिकल केबल बिग्रिएको छैन।
ख अप्टिकल फाइबर जडान को बन्द पत्ता लगाउने: एक लेजर टर्च, सूर्य को प्रकाश, आदि को उपयोग अप्टिकल फाइबर जम्पर को एक छेउमा उज्यालो गर्न को लागी; हेर्नुहोस् यदि त्यहाँ अर्को छेउमा दृश्य प्रकाश छ? यदि त्यहाँ देखिने प्रकाश छ, यो संकेत गर्दछ कि फाइबर जम्पर भाँचिएको छैन।